Kiiniya oo Xassan Sheikh Ku Qasabtey in uu Beeniyo Tiradii uu Ku Sheegay Askartii Lagu Laayey Ceel-Cadde | Hangool News
Kiiniya oo Xassan Sheikh Ku Qasabtey in uu Beeniyo Tiradii uu Ku Sheegay Askartii Lagu Laayey Ceel-Cadde
Hargeysa(Hangoolnews/29.02.2016):- War saxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in warbaahinta ay si qalad ah u tarjumeen wareysi uu siiyay madaxweyne Xasan Sheekh talefishinka Somali Cable kaasoo uu ugaga hadlayay arrimaha weerarkii ka dhacay Ceel Cadde bartamihii bishii Janaayo ee sanadkan.
photo File Xasan shekh
“Tirada madaxweynaha ee 180-200 ee uu wareysiga ku sheegay ulama jeedin tirade saxda ah ee ugaga dhimatay walaalaheen Kenya weerarkii Ceel Cadde,balse Madaxweynaha waxa uu tilmaamayay xajmiga cutubka iyo askarta laga yaabay inay xilligaas kusugneyd saldhigga ciidamada.”ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkan oo luqada Englishka ku qornaa.
Qoraalkan ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu sheegay in Wareysiga uu siiyay Tvga Soomaliyeed uu Madaxweyne Xasan Sheekh ku difaacayay go’aankiisa ahaa inuu shacabka Kenya kala qeybqaato baroordiiqdii ay u sameynayeen geesiyaashii ugaga dhintey Ceel Cadde.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka mid ahaa hogaamiyaal u tegey dalka Kenya aaskii qaran ee loo sameeyay askartii ugaga dhimatay ciidamada Kenya weerarkii ay ururka Alshabaab kuqaadeen saldhig ay ku lahaayeen gobolka Gedo.
War saxaafadeedkan ayaa lagu soo gunaanaday:”Madaxweyne Xasan Sheekh iyo shacabka Soomaaliyeed waxaa ka go’an in ay ku taageeraan walaalahood Kenya howlahooda nabad ilaalineed ee ay u joogaan dalka Soomaaliya iyagoo ka mid a ciidamada AMISOM,waxana aan la qeybsanaynaa xanuunkii iyo khasaarihii ka dhashay weerarkii ay argagaxisada ku soo qaadeen Ceel Cadde.”
Dhowaan ayaa shabakadaha caalamka waxa ay qoreen in wareysi uu siiyay taleefishin afka Soomaaliga ah Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku sheegay in tirada ciidamada Kenya ugaga dhintey weerarkii Ceel Cadde ay u dhexeyso 180-200 oo askari.